Gaa Leta Arc de Triomphe na Paris | Akụkọ Njem
Paris Ọ nwere ndepụta nke ebe ị na-agaghị echefu ma n'ime ya bụ nnukwu ụlọ na-achịkwa mbara igwe Parisian: Igbe nke Mmeri. O doro anya na ị hụla ya ọtụtụ oge na foto na fim, mana ị gara ya?
Ọ bụghị oge na-eri oge, dị ka ndị ọzọ na Paris, yabụ ị nwere ike ịhazi ya maka ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie, oge ole na ole, nnukwu echiche, nnukwu foto na voila, ị nwere ike ịgafe Arc de Triomphe pụọ na gị ndepụta nke ebe ị ga-ezukọ na Paris.
Igbe nke Mmeri
Ọ bụghị naanị ogwe mmeri nke e wuru n'akụkọ ihe mere eme n'ihi na n'ezie ụdị ihe ncheta a adịlarị ewu ewu n'oge ndị Rom. N'ezie, anyị ji ha ụgwọ ịkwalite arches ndị a na-echeta mmeri ndị agha meriri. Ọ bụghị akụkụ, n'ozuzu, nke mgbidi ma ọ bụ ọnụ ụzọ ámá ndị ọzọ nke obodo, kama ọ na-eguzo naanị ya na kwụ ọtọ, n'ụzọ doro anya.
Echere m e nwere arches mmeri ndị e wuru n'oge Rom na ndị ọzọ wuru n'oge ndị ọzọ. Ha nweghachiri ejiji na Renaissance nke bụ mgbe enwere mmasị na Antiquity. Mgbe ahụ, ndị ọchịchị dị iche iche nke Europe wuru arches mmeri dị ka ndị eze ochie. Na Germany, United Kingdom, Russia na ọbụna na Spain na mpụga Europe na United States ma kwere na ya ma ọ bụ na ọ bụghị, na North Korea.
Ma n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kachasị, Arc de Triomphe dị na Paris bụ onye a kacha mara amara n'ụwama ọ bụ. Na Paris bụ… nke ọma, Paris, ọ na-enyere aka nke ukwuu. Bowta a E wuru ya n’agbata 1806 na 1836 na iwu nke Bonaparte. Mmeri ndị agha ọ na-echeta? Agha Austerlitz, Agha nke ndị eze atọ ahụ dịka a makwaara, nke mere na Disemba 1805 nke ndị agha nke Emperor Napoleon I meriri ndị agha jikọrọ Tsar Alexander I na Emperor Austrian Emperor nke Ọstrịa.
Ọ bụ ezie na echiche Napoleon Bonaparte bụ iwu ya na Ebe de la Bastille, saịtị ihe atụ ma ọ bụrụ na enwere ebe ọ bụla na nke dịkwa n'oge ahụ bụ ụzọ ndị agha na-alọta n'agha ahụ, ọ nweghị ike ịbụ na e bulitere ya n'ime Ogige Star o Ebe de l'Etoile.
Na mbido isiokwu ahụ ekwuru m na njiko ahụ na-achịkwa netwọkụ nke Paris boulevards na ọ bụ. Ọhụrụ a mebere ime obodo nke wepụrụ oge ochie Paris nwere mbinye aka nke Haussman, baron nke na-arụ ọrụ n'obodo ahụ n'oge ahụ yana onye ji ụdịrị kpakpando a n'ụgwọ.
Ọ dịghị ihe dị na mberede. Ebumnuche dị n’azụ ụzọ dị iche iche nke malitere site na obere akụkụ bụ na imewe obodo a na-egbochi ma ọ bụ na-egbochi mgbochi ma na-enye ndị agha ikike ịgafe n’ụzọ dị mfe. Taa, site na Plaza de la Estrella Okporo ụzọ nke Great Armada, Okporo ụzọ nke Wagram, Avenue Kleber na ndị kachasị ewu ewu na nke niile, nke nke Champs Elysees ma ọ bụ Champs Ellysees na-amalite.
Arc de Triomphe ka Jean Chalgrin mebere, ọ bụ ezie na ọ nwụrụ na 1811 na ọ ga-agwụrịrị site Jean-Nicolas Huyot nwụrụ anwụ na afọ anọ ka emechara ngọzi ahụ a gọziri agọzi. Huyot sitere n'ike mmụọ nsọ Arch nke Titus na Rome ma kpụrụ ihe ncheta nke Ogologo ya dị mita iri anọ na itoolu na obosara ya na ogidi iri anọ na ise.
Na mpụga nke njiko, ị ga-ahụ mmeri ndị agha Napoleon na-kanye na n'akụkụ nke ime, enwere aha 558 nke kwekọrọ na ndị ọchịagha nke Alaeze Ukwu France. Ndị a kọwara n’okpuru bụ ndị nwụrụ n’oge ọrụ ha.
Na nke ọ bụla n'ime ogidi ahụ nwere ihe oyiyi ma enwerekwa friezes, ọrụ ndị na-ebu mbinye aka nke ndị na-ese ihe bụ Corot, Etex na Pradier. Ihe oyiyi kachasị pụta ìhè bụ nke na-ebu mbinye aka nke ịhụnanya Francois Rude, La Marseillaise. E nwere ihe ọkpụ anọ dị iche iche nke njiko, n'akụkụ ya: Mmeri nke Napoleon, March nke Ndị Ọrụ Afọ Ofufo, Inweta Alexandria na Agha nke Austerlitz. A na-akpọkarị nke abụọ La Marseillaise.
Ebe a kwa enwere Tomb nke onye agha a na-amaghị ama nke Agha Worldwa Mbụ ma n’ezie ire ọkụ ebighi-ebi na-anọgide na-ere ọkụ na-echeta mgbe nile ndị na-enye ndụ ha maka Obodo nna ha. Ire ọkụ na okpokoro ọla kọpa ya nke e ji mma agha mee bụ ọrụ nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Henru Favier, na ọkụ ọkụ emume mbụ mere na November 11, 1923 site n'aka Maginot, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị France n'azụ Maginot Line a ma ama, ihe nchebe netwọkụ nke dara na WWII.
Mana ihe kachasị mkpa bụ na kemgbe ahụ ire ọkụ na-enwusi ike mgbe ọkara ji ọkara gafere elekere n’ehihie kwa ụbọchị, nke onye nnọchi anya otu n'ime narị itoolu na otu nzukọ nke ndị na-alụ ọgụ na mbụ, gbakọtara na mkpakọrịta pụrụ iche maka ụta ahụ. A ga-ekwukwa na ọbụlagodi n'oge ọchịchị Nazi, ọkụ ahụ emenyụghị na enwere ọrụ gọọmentị kwa ụbọchị na Nọvemba 11, nke bụ mgbe France na-echeta njedebe nke Agha Mbụ.
Afọ itoolu gara aga, na 2018, na mweghachi na-arụ ọrụ nke njiko ebe ọ bụ na ihe owuwu ahụ dum, ma karịsịa ihe enyemaka, dị nnọọ ọcha. Tụkwasị na nke ahụ, ọgwụgwọ mmiri na-edozi mmiri adịlarị afọ iri abụọ, n'ihi ya, ọ dị mkpa iji kpochaa, weghachite ihe enyemaka ahụ wee tinye mmiri ọhụrụ.
Ebe ọ bụ na 2008 e nwere n'ime njiko a ngosi nka na-adịgide adịgide multimedia ngosi. A na-akpọ ya N'agbata agha na udo ma na-agagharị na akụkọ ihe mere eme nke ihe ncheta na arches dị ka ihe ncheta. Ihe dị mma bụ na mgbakwunye na ụlọ ngosi ihe nka na ire ọkụ ebighi ebi nke ndị agha amaghi ị nwere ike ịrị ụlọ ma nwee ọmarịcha echiche nke Champs Elysees, Ebe de la Concorde, Arch of Defense na Louvre Museum.
E nwekwara ụlọ ahịa onyinye ma ọ bụrụ na ị zụrụ ya Ihe ngosi nka Paris i nwere ike iji ya.
Ozi bara uru iji gaa Arc de Triomphe
Oge mmeghe: malite n’April 1 ruo September 1 mepere site na 10 ruo 11 elekere; Site na Ọktọba 31 ruo Machị 31 ọ na-eme nke a rue elekere 10:30 nke abalị. Ọ na-emechi na Jenụwarị 1, May 1, May 8 n'ụtụtụ, July 14 na November 11 n'ụtụtụ yana October 25.
Ahịa: Euro 12 na 9 na ego belatara. Thebọchị Sọnde mbụ nke mbata ọnwa bụ n'efu, site na November 1 ruo March 31. Ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala Europe n'okpuru afọ 26 ma ọ bụ onye isi ụlọ akwụkwọ praịmarị ma ọ bụ nke abụọ. Nwere ike ịkwụ ụgwọ ego ma ọ bụ site na kaadị akwụmụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Paris » Gaa na Arc de Triomphe, na Paris